Qormo xiiso xambaarsan:Masayrka iyo saamaynta uu qoyska u leeyahay – SBC
Qormo xiiso xambaarsan:Masayrka iyo saamaynta uu qoyska u leeyahay
Maalmaha Isniinta, Talaadada & Arbacada Insha ALAAH waxaan maalin kasta idiin soo gudbin doonnaa qormooyin xiiso badan oo ku aadan saameynta Masayrku uu ku yeesho qoyska.
W/Q: Cali M. Muuse (Cali Jim)
Ilaa iyo bilowgii aadanaha waxaa socotey kor-ukac tirada dadka. Tallabadaas waxay dadka ku riixday in qoys la sameeyo, ugu dambayna qoysas isku tegey ay ka abuurmaan ummadaha jira. Sidaas darteed ayaa loo oran karaa qoysku waa unugga Koowaad (1aad) ee dhismaha mujtamaca. Waxaa intaas weheliya, marka la doonayo in la hormariyo danaha ummadda caalamka ku nool, markaas ay taasi daruuri ka dhigayso in la isu xil qaamo sugidda daryeelka danaha hoose ee qoys kasta ee bulshada ka mid ah.
Qoyska bulsho ayaa waxa uu ka unkamaa laba shaqsi oo dheddig iyo lab ah, kuwaas oo si gaar ah isu fahmay, dabadeedna si qaanuuni ah u wada noolaada. Dabcan, si loo gaaro helidda baahi-tirka doonista jinsiga ee qofku u qabo mid kale oo gayaankiisa ah, waxaa muhiim ah in marka hore la ebyo lana doono wadiiqo maalin uun kula kulmin karta lammaane kula qaybsada nolosha aasaasiga ah. Hor iyo horraanba, iyadoo qofka ay hoggaaminayso dareenkiisa ku xambaaraya doonis qof kale, oo loo malaynayo in uu si qumman u baylah tirayo holaca gunta hoose ee jirkiisa ka shidmaya, ayaa haddana mar walba taladu ku beegantaa ka qayb qaadashada taranka bulshada.
Marka eegmo sugan loo yeesho qoysaska bulshada casriga ah ee maanta caalamka ka jira, waxaa muuqanaya dhib badan oo had iyo jeer la soo dersa qoyska. Dhanka qoysaska somalida, waxaa si weyn la isugu raacsan yahay, in qoysas somaliyeed oo markoodii hore si wanaagsan dhismahoodu ku bilowday ay goor dambe burbureen. Qoysas tiro badan oo dumay ayaa sidoo Alle u qaddaray ka sokow waxaa loo aanaynayaa dhowr xaaladood in ay sabab u yihiin kala tagga iyo burburka qoyska. Marka haddaba, laga yimaado duruufaha ad-adag ee qoyska burburka ku keeni kara, sida dhaqaale xumida, waxaa iyana dhinacooda jira isirro kale oo uu ugu horreeyo Masayrka.
Masayrka waxaa lagu tilmaamaa in uu udub-dhexaad u yahay kala fogaanshaha labada isu-dhaxa (is-qaba), sababtuna waxa weeye baa la oran karaa, in masayrku uu yahay fal dareen oo xun, oo qofka ku qaada in uu cadowtinimo fog u qaado lammaanihiisa kale. Masayrku waa dareen rabitaan oo si xad dhaaf ah nafta qofka ugu sheega in lammaankiisu aanu jeclayn, in lammaankiisu aanu danaynayn, in lammaankiisu aanu u dhega-nuglayn iyo weliba in lammaankiisu wax kasta oo wanaag ah oo uu isagu xaq ugu lahaa uu lammaankiisu u qabto shaqsi kale.
Masayrku waa xaalad shaki iyo tuhun ka samaysan oo qofka maskax ahaan ugu furanta. Masayrku ugu horreyn wuxuu haleelaa qaybta maskaxda ee dareenka qofka ee ku aaddan dhinaca hawlaha gogosha. Isla markaas ayuu qofku bilaabaa hadallo iyo ficillo ka dhan ah lammaankiisa. Xilliga lagu jiro astaamaha uu masayrku caanka ku yahay, waxaa si ba’an loogu tuntaa sharafka iyo sumcadda shaqsigu ku leeyahay bulshada dhexdeeda. Sidoo kale, waxaa mar kastaba wiiqma ilaa goor dambe laba waayo kalsoonida labada ruux u dhexeysey ee uu qoysku ku dhisnaa.
Doodaha iyo muranka qalafsan ee masayrka ku saabsan waxay intooda badan ka bilowdaan guriga dhexdiisa, gaar ahaan qolka jiifka. Eedaha aan meelna haysan ee la isu jeediyo ayaa intooda ugu daran waxaa la isku furaa saacadaha dambe ee habeenkii. Sidaas oo ay tahay, waqti yar kaddib, ayaa culayska lammanaha ka dhex jira dibadda u soo baxaa. Qofka masayrsani wuxuu dadkoo dhan u sheegaa eedaha uu lammaankiisa ka tirsanayo. Sidaas oo ay tahay, haddana dadka kama qaato wax tala ah ee tiisa ayuu ku dhaqaaqaa. Waa markaas goorta shaqsiga masayrsani uu iska hadlo, isagoo aan hadalkiisa u meel dayin……
La soco Qaybta 2aad……….Maalinimada beri (Isniin) Insha ALAAH